Pearl ye Africa Tourism Expo kutanga kuenda chaiyo mudunhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Pearl ye Africa Tourism Expo kutanga kuenda chaiyo mudunhu
Bhizinesi Kufamba • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Pearl ye Africa Tourism Expo
Iyo 6th Pearl ye Africa Tourism Expo (POATE) yakatanga svondo rino neChipiri, Kubvumbi 27, 2021, pasi pedingindira rinoti, "Kutangazve Tourism yeRegional Economic Development."
Zvese mumhando yakasarudzika, chiitiko ichi chaive nevaratidziri, musangano wega-wega, uye hurukuro dzepaneru kune avo vakatora chikamu.
Umuyobozi Mukuru wa Uganda Tourism Board (UTB), Lilly Ajarova, akagashira varindi vese kune iyi nzira nyowani yekuita bhizinesi.
POATE akadzosa humwe hupenyu, achirarama kune: "Tine POATE tichabatana nenyika."
Iyo POATE ndiyo yekutanga yekushanya expo mudunhu kuenda chaiko. Yakamhanya kusvika muna Kubvumbi 29, 2021, papuratifomu ine vashanyi mazana mana vanosanganisira 400 varatidziri online vairatidza:
Dhairekitori zvinyorwa uko varatidziri vakakwanisa kuratidzira zvigadzirwa zvavo nemasevhisi mune akasiyana mafomati e multimedia anosanganisira vhidhiyo, mawebhusaiti zvinongedzo, uye e-mabrochure.
Misangano-yega-yega yakasarudzika kune vatengi, vezvenhau, uye varatidziri chete izvo zvakabvumidza vatori vechikamu kuti vabatanidzane neepamusoro nhanho yevatengesi veindasitiri vehunyanzvi vane simba rakananga rekutenga.
“Kutungamira Chizvarwa” - chikuva chaicho chakabvumidza vatori vechikamu kuti vagare kure vachironga munhu wega-maminitsi makumi matatu emisangano yevhidhiyo uye network nevashandi veindasitiri.
Sarudzo dzemukati yezvikamu uko vatori vechikamu vakabata akasiyana siyana ehupenyu maratidziro, makakatanwa, uye maforamu nevemaindasitiri nyanzvi vanogadzirisa nyaya dzemusoro pamari yekudyara, misika, nezvimwe.